Myanmar government planning for another episode of Anti-Muslim riots | San Oo Aung's Weblog
I have readapost in an Internet blog, allegedly claimingaKalar in Yangon hadacontract with Military Junta to collect the donation to Shwedagon Pagoda with 5000Billion Kyatayear.
I do not know the authenticity of this information but it will definitely flare up the Anti Muslim sentiment in Burma.
read the following news,
ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ ရိုဟင်ဂျာလှေစီးပြဿနာဖြစ်တဲ့ အချိန်
ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာများမှာ ထိပ်တန်းသတင်း အဖြစ်လူတွေစိတ်ဝင်စားလာအချိန်၊
အစ္စလာမ်နှင့် တမန်တော်မိုဟာမက်(ဆွ) ကိုစော်ကားထားသော အီးမေးများ online တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လှုပ်ရှားလာအချိန်၊ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို အခြေခံပြီး အစိုးရ ဘလောက်ဟုယူစရသော ဘလောက်များတွင် ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေးမှစပြီး အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး အထိရေးသားလာခြင်း၊အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအကြား အထင်အမြင်လွှဲမှားစေသော ဆောင်းပါးများ ဆက်တိုက်ဖော်ပြလာခြင်း၊ဒါတွေအားလုံးဟာတိုက်ဆိုင်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာတာလား။
ဒီပြဿနာမဖြစ်ခင် မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ် တို့ ရေပိုင်နက်ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့တာ အခုထိမပြေလည်သေးပါ။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင် တိုင်းရင်းသားမြန်မာမွတ်စလင်မ်များ လည်း အခြားသော ဘာသာဝင်များနှင့်လက်တွဲပြီး ဆရာတော်ကြီးများနှင့် လက်တွဲပါဝင်ခဲ့မှုအား စိုးရိမ်လျက်ရှိသော နအဖအစိုးရအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် သွေးခွဲမှုများပြုလုပ်ရန် အစဉ်ကြိုးပမ်း နေချိန်တို့တွင်
နောက်ဆုံး သတင်းရရှိချက်အရ နအဖ အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်တွင်း၌ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးအဓိကရုန်းတခု ဖန်တီးရန်ရှိကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန မှအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖေါ်ပြသော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်
Monday, 02 February 2009 15:46
“Probably, it is underaunit with the Ministry of Home Affairs,” the source said.
“Using such instigators, the military government has planned to spark communal riots between Bamar and local Indian community (known as Kular) inacouple of months,ameans the Burmese military government uses to divert the general public’s political/development attention,” the source said.
The military government’s motive is to stay in power.
ဟုတွေ့ရှိရပါသည်။ သတင်းအပြည့်အစုံကို အောက်ပါလင့်တွင်ဖတ်ပါ။
အစ္စလာမ်နှင့် တမန်တော်မိုဟာမက်(ဆွ) ကိုစော်ကားထားသော အီးမေးများ
ထိုစော်ကားသူ၏ နောက်ထပ်အီးမေးတစောင် တို့အပြင်
အစ္စလာမ်ဆန်ကျင်ရေးဖော်ပြလာသော စစ်အစိုး ရ လိုလားသည့် ဘလောက်ဆောင်းပါးများ
I hope you can share these news which is the part ofadeliberate plan of the Military Junta of Burma to use its long term policy of using religious hatred to create the political environment that may benefit the Military Junta of Burma to stay in Power Forever.
Filed under: Burma | Tagged: Activists, Anwar Ibrahim, ASEAN, Ban Ki-moon, Bangladeshi, Burma, Burmese History, Burmese Muslims, CHINA, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Daw Aung San Suu Kyi, Dictators, DSAI, Ethnic Minorities, Iraq, Islam, Malaysia, Military Dictators, Military Junta, Myanmar, OIC, Politics, Racial Discrimination, Rule of Law, Singapore, SPDC, Tatmadaw, Thailand, Than Shwe, UN, UNHCR, UNSC, USA |
« AP:Microsoft streamlines Windows7options 100,000 Indonesian workers to be sent home »